Marka aad si digital ah aad video files, waxaa jira laba arimood oo caadi ahaan loo baahan yahay in la sameeyo, sixiddiisa, iyo diinta qaab ku habboon. Raadinta ee diinta file aan helno tiro badan ama barnaamijyada la heli karo, qaar ka mid ah inta badan waxaa ka mid ah hawlaha ay tafatir loo baahan yahay in ay yihiin iyo sidoo kale, oo kala duwan oo ka mid qaali ah oo adag baakadaha xirfad leh iyada oo si buuxda u lacag la'aan ah, oo gogo 'aad u fudud of software in kaliya shaqada ka mid ah. Helitaanka xaq u xirmo aad u waa geedi socod adag oo leh doorasho aad u badan, oo sidaas daraaddeed waxaan eegi doonaa helitaanka ugu fiican ee convertors ka soo jiraan.
1. Adobe jilitaankii
Aadna qaali, in kasta oo kirada cusub bil kasta uusan wax yar yareeyo saamaynta, Adobe jilitaankii waxaa ka buuxa ah oo ku saabsan video xirmo xirfad, sida xaqiiqada ah aan qof walba, laakiin kuwa raadinaya in ay soo saaraan content isticmaalka ganacsi tani waa aalad. Waxaa si toos ah uga qalab qabashada ah dajiyaan karaa warbaahinta haddii aad u baahan tahay, iyo wax soo saarka xaalkaa in badan qaab kasta oo aad rabto, isagoo intaa ku daray in saamaynta heerka xirfadeed, horyaal iyo wixii la mid ah sida aad u tagto iyo sidoo.
Qalooca waxbarashada xad yaacday A, laakiin wax kale u yimaado ayaa ku dhow inay ka shaqeynayaan baakadaha this siinayo inaad soo fikrado aad hal abuur leh nolosha.
Xirmo A wax badan ka sahlan, laakiin gees uga leexan xagga kartida ay diinta ka, kuwaas oo ballaaran, Converter Video ah ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah awoodaha tafatirka aasaasiga ah, oo ay ku jiraan clip, ku milmaan iyo files kala, ku dar subtitles iyo watermarks iyo sidoo kale soundtracks dheeraad ah. Waxba sida xirmo Adobe si dabiici ah, waxaa retails ku dhowaad 5% oo qiimaha Ciyaar ka dib oo dhan, laakiin ku filan si ay ugu daboosho baahida tiro badan oo dadka isticmaala. Halleeyo lillaahinimada ayaa sidoo kale faa'iido ah geynta, software yahay mid sahlan in la fahmo iyo natiijo weyn ka.
Tani waxay la mid waxbay ushafeeci idanka eg weerarka qurbaanka Xilisoft ah, oo ay ka mid waafaqsan yahay in ka badan 150 qaabab file, aalada diinta fudud iyo qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka ay ka mid yihiin kala oo ku milmaan, iyo sidoo kale ku daray weli images galay video iyo soo saarida sawirrada video, faa'iido u thumbnails iyo wixii la mid ah. Goobaha gaarka ah ee diinta aad video in la isticmaalo on iPads, iPhone, PS3, qalabka Android, mashiinada Madaxweyne Siilaanyo oo kulan Nintendo, diinta aad footage wax isticmaali karo qalabka la doonayo waa xog laftiisa.
4. Qof kasta oo Video Converter
Mid ka mid ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qabsadaan, edit iyo badalo gudahood codsiga ka mid ah, samaynta aalada si aad u footage 8mm fudud aad u. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu leeyahay qaar ka mid ah lagu daro aad u fiican in fidin ka baxsan nidaamka, kuu oggolaadaan in aad xitaa gubi aad footage in DVD in ciyaari doono ciyaaryahan walba iyo sidoo, mar kale gudaha ka app la mid ah. Xirmo aad u ballaaran oo kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah qaadato footage 8mm, waxay liqi, iyo waxa soo saarka xaalkaa in qaab kasta oo aad rabto in laga yaabo.
Muuqaalka fiican halkan dhigay, laakiin ka taagan yahay xawaaraha, waxa ay sheegtay in loogu badalo video ilaa toddobaatan sagaal jeer ka dhakhsi badan wax kasta oo kale. Ma hubo oo ku saabsan nambarada, laakiin waxaa la dareemi dhakhso ugu diinta badan halkan baakadaha kale waa, si haddii xawaaraha adiga muhiim kuu ah, tani waa doorasho wanaagsan.
Wax kale oo aan ahayn, waxaan wax ka yaqaanaan 150 qaabab file lagu daray, goobaha tafatirka aasaasiga ah iyo presets qalabka mobile kala duwan si ay u sameeyaan doorashada qaab saxda fudud.
Ultimate waa version buuxa featured of software this, si kastaba ha ahaatee waxaa jira version wax yar ka jari ka maqan meeshii gubatay DVD iyo dhowr fursado wax soo saarka kale ee qiimo jaban, si aad baahidaada ku beegtid kartaa, waxey halkan. Tani waxay la mid ballan ka badan 180 qaabab file Xoojiyey presets ee telefoonada shaqsi, sida S Galaxy iyo iPhone, inay ka faa'iideysato shaashadaha ay.
Halkan waxaad kaloo sameyn kartaa wax soo saarka si toos ah DVD la gubi ah DVD hidi dhameystiran la bedeley, oo xitaa ka shaqeeyaa cajaladaha Blu-ray sidoo.
Dhamaystiran, xirmo A haddii wax yar qaali ah, oo leh, waayo, wax soo saarka heerka macaamiisha ugu yaraan, kala duwan ee ubalaadhan oo qaabab diinta, iyo interface fiican oo nadiif ah si ay u tagaan la fudud ah si ay u fahmaan aalada dhigaya halleeyo lillaahinimada iyo habka dhan laftiisa.
Kanu waa xoogaa aan caadi ahayn ee in ay tahay badan kaliya Converter ah iyo wax kale. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan (abaalmarinta ganacsi version kula qaabab dheeraad ah oo aad kharashka). Sida oo kale, waxa aanu eegi wax yar ka dhiman yihiin qaababka halkan, laakiin haddii aad rabto in aad si loogu badalo aad file video mid ka mid ah in ka badan caadi ahaan loo isticmaalo galay, taas oo si fudud oo si fiican u sameeyaa la buunbuuninayo yar iyo wax kharash ah.
Sida oo kale waxa ay ka dhigan tahay fursad faa'iido leh dad badan, oo ma u baahan tahay mana doonayaan fursadaha kala duwan ee ay soo bandhigtay qaar kale.
8. AHV Video Converter
Tani waxay la mid ayaa ku guuleystay abaalmarino badan oo, iyo waa ay fududahay in la arko sababta, weyn, fududahay in la fahmo interface oo kala duwan ka mid ah qaababka ay bixisaa wax walba laga yaabaa in software diinta aad aad rabto.
Iyada oo tiro badan oo qaabab laga heli karaa oo ay ku jiraan presets si wax soo saarka qalabka kala duwan oo gaar ah sida iPhone, shidin iyo wixii la mid ah, awood u leeyahay inuu ku shido aad files gediyay si toos ah u DVD ama Blu-ray ka shaqeynayaan tafatirka hidi, AHV bixiyaa qaababka ugu aad rabto in laga yaabo si loogu badalo film 8mm aad.
Xirmo kale si buuxda u saftay kuu oggolaadaan in aad liqi aad footage ka qalab qabashada ku habboon, waxaa edit, waxaa loogu badalo in qaab kasta oo aad rabto in aad wax soo saarka iyo sida file ah ama xitaa DVD ama Blu-ray.
Intuu kulan kale muuqaalada, waxa aanu u Dhawdahay haysan yar oo ay waaxda farshaxanka, oo inkasta oo ay tani gudaheedana sinaba uma ay detracts ka qabadka, waxa xusid mudan sida interface waxaa laga yaabaa in ay muhiim u tahay qaar ka mid ah. Kala duwan ee qaab waafaqsan iyo aalada diinta wax ku ool ah ka dhigi software si sahlan oo hufan si kastoo ay u isticmaalaan, sidaa daraadeed waxa uu qiimihiisu yahay eegno.
Marka la barbardhigo mid ka mid ah la soo dhaafay, Pavtube ayaa aad u fiican, oo casri ah interface ka raadinaya, iyo in ka badan waxa u taageeray la set a feature buuxa, kala duwan weyn oo qaab waafaqsan, qalabka tafatirka aasaasiga ah oo awood u leh inay wax soo saarka ee DVD iyo qaab Blu-ray (laakiin ka duwan kuwa kale, aan gubi warbaahinta).
In kasta oo la la'yahay laba qof oo ah muuqaalada qaar ka mid ah halkan, weli waa xirmo weyn oo mudan in eegno.
Sida aan ku arki, waxaa jira qalab badan oo halkaas si ay uga caawiyaan badalo aad video oo mar baad u digital ah, ka xirmo xirfadeed (oo qiimihiisa la xiriira) ee jilitaankii si lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan Prism, waxa kaliya oo ku saabsan meel u dhaxaysa. Haddii baahida diinta yihiin ee qaabab file si caddaalad ah wax caadi ah in la isticmaalo on qalabka maalin walba, wax walba oo halkan ku gaari kartaa in aad u, taas oo ka mid ah aad ugu dambeyntii dooran noqon doonaa wax kasta oo looga baahan yahay dheeraad ah iyo dhadhan shakhsi.
> Resource > Beddelaan > Top Ten Best converters Tubada 8mm / Super 8 Video converters